Hita ve ny doka horonantsarinao? | Martech Zone
Hita ve ny doka horonantsarinao?
Inona no isaina ho hita?
Factors that impacted viewability include consumer behavior, device, page layouts, player size, and position of the ad on the page. View Google's tatitra fikarohana feno izay nanome aingam-panahy an'ity sary ity. Anisan'izany ny antony nanaovana ny fikarohana, ny fomba fiasa, ny fahitana ny firenena, ary ny antsipiriany bebe kokoa momba ny zavatra hita.
Tags: Google +IABBirao fanaovana dokambarotra mifandraikaMedia Rating Councilmrcfahitana doka videodoka videoYouTubedoka youtube
Dingana 8 hanatsarana ny valin'ny Marketing Digital
May 29, 2015 ao amin'ny 2: 05 PM
Tena milay! Ny infographic-nao dia mamintina tsara ny tatitra google tena izy. Tena manontany tena aho hoe orinasa infographic inona no niarahanao niasa?
May 31, 2015 amin'ny 1: 49 AM
Gautam, Google dia nanao an'io infographic io. Na izany aza, DK New Media manao infografika mahafinaritra. Ampahafantaro ahy raha mila fampahalalana kely ianao.